CSOs petition government on typhoid - The Zimbabwean
CSOs petition government on typhoid
More than 30 civil society organisations will on Wednesday petition the government of Zimbabwe over its failure to act on reports of typhoid disease and water issues in Harare and other parts of the country.
“Deeply concerned about the continued outbreaks of preventable and medieval diseases such as Typhoid in Zimbabwe and the unresponsiveness exhibited by the coalition government and other stakeholders, the CSO’s are petitioning the coalition government,” read the communication.
The CSOs which include Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Doctors for Human Rights, Zimrights and many others will come together to seek an explanation from the government on its plans and actions to the outbreaks that have become the order of life in Zimbabwe.
Health experts have continuously warned that Zimbabwe remains at risk of another major outbreak of waterborne diseases because the same problems that helped drive the last cholera epidemic remain unresolved.
At least 30% of Zimbabweans have little or no access to safe water and sanitation according to an AMCOW country status overview.